TechadminLab - နည်းပညာဘလော့
Mac အတွက် & Apple က
Windows အတွက်ရပ်စဲခံရဖို့အတွက် Adobe Shockwave
သငျသညျကိုအင်တာနက်နှင့်အတူကြီးပြင်းလာလျှင်, ငါသည်သင်တို့ကို Adobe Shockwave အကြောင်းကိုငါသိ၏သေချာဖြစ်၏။ ငါတို့ရှိသမျှသည်မာလ်တီမီဒီယာ applications များနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားရန်တစ်ချိန်ချိန် installed ခဲ့သောတစ်ဦးက plugin ကို။ နောက်ပိုင်းမှာ 1995 အတွက် Adobe က, ပလက်ဖောင်းကဝယ်ယူ 2005 အတွက်မက်ခရိုမီဒီယာကဖြန့်ချိ ...
တစ်ချိန်တည်းအားလုံးကို Windows 10 ဖုန်းများအတွက်တွင် Store က မှစ. Apps ကပ Install
Windows ကို 10 အတွက် Store မှ app တစ်ခု Installing လွယ်ကူပါတယ်။ သင်ရုံ Store မှာ app ထဲမှာ app ကိုဖွင့်စာမျက်နှာဖွင့်လှစ်ပြီးတော့သင့်ရဲ့ PC ပေါ်မှာ app ကို download လုပ်ပြီး install ဖို့ GET button ကို click နှိပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော်သင်သည်အဘယ်သို့မျိုးစုံ PC များရှိပါက ...
Firefox ကို Send: ဝေမျှမယ်ဖိုင်များ Up ကို 2.5GB ရန်
အခမဲ့ဖိုင်ခွဲဝေမှုန်ဆောင်မှုများအဘယ်သူမျှမရှားပါးမှုအခက်အခဲရှိပါသည်။ တကယ်တော့န်းကျင်သည်မိုဃ်းတိမ်သိုလှောင်မှုနဲ့ဖိုင်ခွဲဝေမှုန်ဆောင်မှုများရာချီရှိပါတယ်။ OneDrive, Google Drive ကို Dropbox, နှင့် iCloud Drive ကိုထွက်အဲဒီမှာပေါ်ပြူလာဖိုင်သိုလှောင်မှုနှင့်ခွဲဝေမှုန်ဆောင်မှုများဖြစ်ကြသည်။ Firefox ကို Send Firefox ကို Send တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ...
Windows ကို 10 သည် Lenovo က USB မှတ် Recovery ကို Drive ကို Create ရန်ကဘယ်လို
တစ်ဦးကို USB ပြန်လည်နာလန်ထူ drive ကိုဖန်တီးရန်အတွက် Windows 10 အတွက် built-in utility ကိုရှိပါတယ်။ Lenovo ကပီစီကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများသည်အပါအဝင်အားလုံးအသုံးပြုသူများသည်, Windows 10 ကို USB ပြန်လည်နာလန်ထူ drive ကိုကွိုတငျပွငျဆငျဖို့ built-in tool ကိုသုံးနိုင်သည်။ Built-in ပြန်လည်နာလန်ထူ utility ကိုအတူပြဿနာကဖန်တီးမပေးနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ...
သင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး Activation မရှိရင် Microsoft က Office ကိုသုံးပါနိုင်သလား?
သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Microsoft Office ကို 2019 သို့မဟုတ်ရုံး 365 တစ်ခုလိုင်စင်မဲ့မိတ္တူကို install ရှိသည်နှင့်သင်ကသက်ဝင်မပါဘဲ Microsoft Office ထုတ်ကုန်ကိုသုံးနိုင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသိရန်လိုသလား? ဒီလမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာကျနော်တို့တဦးတည်းအတွက် Microsoft Office ကိုအသုံးပွုနိုငျအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးဆွေးနွေးကြမည် ...
Google ကမတ်လ 2019 Core Update ကို: အကျိုးဆက်များနှင့်ခြေလှမ်းများယူမှ
Google ကယခုနှစ်မတ်လများ၏ 12th တခုတခုအပေါ်မှာ algorithm ကို update ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ထိုသို့နှင့်အတူ၎င်း၏သက်ရောက်မှု၏စကေးကျော်ထင်မြင်ချက်တွေအများကြီးထံသို့လာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် niche နှင့်ဆိုဒ်များအများဆုံးထိခိုက်ခံရဖို့ရှိပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းတူးမတိုင်မီ ...
Blocked အသံ auto-Play စနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ Mozilla Firefox ကို 66.0
Mozilla Firefox ကို 66.0 နှစ်ရက်အကြာဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အခုတော့ Ubuntu ကို 16.04, Ubuntu ကို 18.04, Ubuntu ကို 18.10 ၏အဓိက repositories ကရရှိနိုင်ပါတယ်။ Firefox ကို 66.0 လွှတ်ပေးရေးကိုမီးမောင်းထိုးပြ: Block ကိုအသံသည် Auto-ကစား။ သငျသညျခြွင်းချက် add ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂါရပ်ကို turn off နိုင်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးဒီဇိုင်းသစ်ကို tab ကိုကနေတဆင့်ပိုမိုလွယ်ကူရှာဖွေရေး ...
Avidemux 2.7.3 အမျိုးမျိုးသောဒီကုဒ်ဒါပြင်ဆင်ချက်များ (Ubuntu ကို PPA) နဲ့ထုတ်ဝေ
Avidemux ကဗီဒီယိုအယ်ဒီတာဒီကုဒ်ဒါပြင်ဆင်ခြင်းများနှင့်ထွေသေးငယ်တဲ့တိုးတက်မှု Avidemux 11 လွှတ်ပေးရန်ပျေါလှငျအတူရုံ 2.7.3 ရက်နောက်ဆုံးအပြီးသစ်တစ်ခု bug ကို-ပြင်ဆင်ချက်ဗားရှင်းဖြန့်ချိ: Vapoursynth ယခုသည် dynamically အမှားပေါ့ပ်အပ် ASF / WMV demuxer ပြင်ဆင်ချက်, BMP ဒီကုဒ်ဒါပြင်ဆင်ချက်ပြန်-enabled PNG ရှောင်ရှားရန်တက်နေတဲ့ ဒီကုဒ်ဒါအခြေခံပညာလက်ရှိကယ်တင် ...
Ubuntu ကို 18.04, 16.04 အတွက် Snap ကနေတဆင့်အလွယ်တကူဂူပုံပြင် Install
NXEngine Evo, ထိုဂန္ side-scrolling ပလက်ဖောင်းဂိမ်းဂူပုံပြင်တစ်ခုပြန်ရေးရန်ယခုဒင်္အထုပ်ကိုအသုံးပြုပြီး Ubuntu Linux အတွက် install လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ NXEngine Evo စတူဒီယို Pixel အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး (စဂူပုံပြင်အဖြစ်လူသိများ) ကိုလက်ရာခုန်-and ပြေးပလက်ဖောင်း Doukutsu Monogatari တစ်ဦးပြည့်စုံက open-source ကိုယ်ပွား / ပြန်ရေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ...
KeePassXC 2.4 High-DPI သည် 4K မျက်နှာပြင်ချုံ့ချဲ့နှင့်အတူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ
နှစ်ခု beta ကိုထုတ်ပြီးနောက် KeePassXC password ကိုမန်နေဂျာ 2.4.0 နောက်ဆုံးတော့တည်ငြိမ်တတ်၏။ ဤတွင် Ubuntu ကို 16.04, Ubuntu ကို 18.04 နှင့်ပိုမိုမြင့်မားထဲမှာ install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုပါပဲ။ KeePassXC 2.4.0, High-DPI ကိုပြသဘို့ချုံ့ချဲ့မှုစနစ်ကိုသြဒိနိတ်ဖွသစ်ကိုဒေတာဘေ့စ wizard ကိုဖြည့်စွက်, အဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသောနှင့်အလိုအလျောက် update ကိုစစ် KeeShare ဒေတာဘေ့စထပ်တူ ...
Ubuntu မှာ Install လုပ်နည်း, ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ Editor ကို3Tag Kid3.7.1
Kid3 အသံ tag ကိုအယ်ဒီတာယနေ့ဗားရှင်း 3.7.1 ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤတွင် Ubuntu ကို 16.04, Ubuntu ကို 18.04, Ubuntu ကို 18.10 နှင့်ပိုမိုမြင့်မားထဲမှာ install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုပါပဲ။ Kid3 3.7.1 အဓိကအားဘာဂ်နှင့်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်တိုးတက်မှုတတ်၏။ အများစုမှာ features အသစ်ယခုမှောင်မိုက်ဆောင်ပုဒ်, ပိုကောင်းတဲ့ထောက်ခံပါတယ်သော Android ဗားရှင်း, ပစ်မှတ်ထား ...
Ubuntu ကို 18.04 အတွက်ထိပ်တန်း Panel ကို၏ညာဘက် [လျင်မြန်စွာသိကောင်းစရာ] ရွှေ့နာရီ
ဒါကအမြန်သင်ခန်းစာ Ubuntu ကို 18.04 Gnome Shell ကမှာထိပ်တန်း panel ကို၏ညာဘက်မှအလယ်တန်းကနေနာရီရွှေ့ဖို့ဘယ်လိုပြသမယ်။ ရက်စွဲနှင့်အချိန် Gnome3desktop ပေါ်မှာအတွက်ထိပ်တန်း panel ကအလယ်ထဲမှာဖော်ပြပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာခက်ခဲမယ့် ...
1234... 1,570 နောက်တစ်ခု
25 ပင်လယ်, 2019 0
ဖြိုခွင်း3လက်ပေါ် preview ကို - တစ်ဦးကကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောဂိမ်းဘိုအယူအဆကနေပေါ်ထွက်လာ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2, 2019 0
'' ရုတျတရကျဘေးက '' ခေါ်ရာသီအလိုက်ပွဲများ Get မှနိုင်ငံတော်သီချင်း; အသေးစိတ် PC ကိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့် UI ကို Launch အပ်ဒိတ်များ
Nvidia GeForce RTX 2070 8 GB ကို GDDR6 Graphic Card ရဲကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း FT ။ MSI သည်ချပ်ဝတ်တန်ဆာ X ကို ...
AMD Radeon VII 7nm GPU ကို၎င်း၏ Way ကိုရန် Review စမ်းသပ်ခြင်း Bench ကို
နောက်ဆုံးရကို Windows 10 19H1 Build Windows ကိုရောနှောထားသော Reality အတွက် Desktop ကို Apps ကပများရရှိစေ
နိုင်ငံတော်သီချင်း 4K ကျားကွက်ပေါ်တွင်အသုံးပြု Xbox One မှာ X ကိုထက် Pro ကို PS4 အပေါ်ချောမွေ့အလုပ်လုပ်စေပြီး ...
တချို့ကအသုံးပြုသူများအဘို့ကို Windows 10 အပ်ဒိတ်များလူငယ်များသို့တဖန် - Google ရဲ့ DNS ကိုရန် Switch ...
Asus ကစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Zenfone 5Z မှအန်းဒရွိုက် Pie ထုတ်မိတ်ဆက်: ဤတွင် install ဖို့ဘယ်လိုဖွင့်
FaceTime bug ကို iPhone ကိုအသုံးပြုသူများသည်ပြောဆိုမှုများအပေါ်ခိုးနားထောင်လို့မရအောင်ပေးနိုင်ပါတယ်; Apple ကသေးအရေးယူ
PUBG update ကို #25 patch ကိုယခုစမ်းသပ်မှုဆာဗာပေါ်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်: Bizon SMG, cant မွ, Vikendi ...
ဝဘ်များအတွက် WhatsApp ကိုရုပ်ပုံ-In-ရုပ်ပုံ option ကိုရရှိသွားတဲ့: ဤတွင်စတင်ရန်ဖို့ဘယ်လိုဖွင့်
Samsung ရဲ့ Galaxy M10, M20 စျေးနှုန်းသိုလှောင်မှုရှေ့ဆက်ပစ်လွှတ်၏ပေါက်ကြားအသေးစိတ်ကို variants
ပုံမှန်မဟုတ်သောလျင်မြန်စွာဘက်ထရီယိုစီးမှုဝေဖန်ခံရ 6T ပိုင်ရှင်တွေ OnePlus: fix ဖို့အဖြေတစ်ခုရှိပါသလား ...
WhatsApp ကို, Instagram ကို Facebook က Messenger ကိုပေါင်းစည်းမှု: ကအသုံးပြုသူများအဘို့အဘယ်သို့ဆိုလိုတယ်သနည်း?
PUBG Mobile ၏ဖုတ်ကောင် mode ကို, ကြောက်စရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အကောင်းဆုံး crossover အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည်: ဆန်းစစ်ခြင်း
မူပိုင်ခွင့်© 2019 TechadminLab